Oziọma taa 17 Septemba 2020 na okwu Pope Francis | Blọọgụ nke ekpere
Oziọma taa 17 Septemba 2020 na okwu Pope Francis
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 17, 2020 Septemba 18, 2020
Umu-nna-ayi, anamezikwara unu ozi-ọma ahu nke m'mere ka unu mara, na unu anatawo-kwa-ra, ya bu nke unu onwe-unu n steadguzosi ike na ya, nke an arezoputa kwa ya nime ya, ma ọ buru na unu edebe ya dika M'nuru unu. Ọ gwụla ma i kwere na ihe efu!
N’ezie, enyefere m gị, nke mbụ, ihe mụ onwe m natakwara, ya bụ na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dịka Akwụkwọ Nsọ si kwuo nakwa na e liri ya nakwa na o biliri n’ụbọchị nke atọ dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo na ọ pụtara n’ihu Sifas ma mechaa pụta n’ihu ndị ozi iri na abụọ ahụ. .
O mechara pụta n’ihu ihe karịrị narị ụmụnna ise n’otu oge: ọtụtụ n’ime ha ka dị ndụ, ebe ụfọdụ nwụrụ anwụ. Ọ pụtakwara n’ihu Jems, ya mere, ọ pụtara n’ihu ndịozi niile. N’ikpe-azu ha nile ọ putara n’onwe m dika ime-ime.
N’ezie, abụ m onye pekarịsịrị ozi n’ime ndịozi na ekwesịghị m ka a kpọọ m onyeozi n’ihi na esogburu m nzukọ nsọ nke Chineke.Ma site n’amara Chineke, abụ m ihe m bụ, ma amara ya n’ime m abụghị ihe efu. N'ezie, m gbara mgba karịa ha niile, ọbụghị mụ, kama, kama amara nke Chineke nke dịnyeere m.
Yabụ na mụ na ha, yabụ anyị na-ekwusa ya, otu a ka ikwere.
Lk 7,36: 50-XNUMX
N’oge ahụ, otu n’ime ndị Farisii kpọrọ Jizọs ka ya na ya rie nri. Ọ banyere n’ụlọ onye Farisii ahụ wee nọdụ na tebụl. Ma le, otù nwanyi, bú onye-nmehie nke si n'obodo ahu, ebe ọ matara na ọ nọ n'ulo onye-Farisi, ọ wetara ite-uda nke ihe-nsure-ọku numesì ísì utọ; guzo n'azụ, n'akụkụ ụkwụ ya, na-ebe ákwá, ọ malitere iji anya mmiri na-agba ha, wee jiri ntutu isi ya hichaa ha, susuo ha ọnụ ma fesa ha ihe nsure ọkụ.
Mgbe onye Farisii ahụ kpọrọ ya hụrụ ya, o kwuru n’obi ya, sị: “Ọ bụrụ na nwoke a bụ onye amụma, ọ ga-ama onye ọ bụ, marakwa ụdị nwaanyị ahụ na-emetụ ya aka: ọ bụ onye mmehie!”
Jizọs wee sị ya, "Saịmọn, enwere m ihe m ga-agwa gị." Ọ zara, si ha, Onye-nwe-ayi. Onye ji ụgwọ nwere mmadụ abụọ ụgwọ: otu ji ya narị mkpụrụ ego dinarịọs ise, nke ọzọ ji iri ise. Ebe ọ na-enweghị ihe ọ ga-akwụ, ọ gbaghaara ha abụọ ụgwọ ahụ. Nye n’ime ha ga-ahụ ya n’anya karị? ». Simon zara ya, "Echere m na ọ bụ onye ọ kachasị ịgbaghara." Jisus siri ya, I n wellkpe nke-ọma.
Ma, mgbe o chigharịkwuuru nwanyị ahụ, ọ sịrị Saịmọn: «you hụrụ nwanyị a? Abatara m n’ụlọ gị, i nyeghị m mmiri ka m saa ụkwụ; mana o ji anya mmiri ya dee ụkwụ m ma jiri ntutu ya hichaa ha. I nyeghi m nsusu; ya, n'aka nke ọzọ, kemgbe m banyere, akwụsịbeghị isusu ụkwụ m ọnụ. I teghị isi m mmanụ; ma o fesawo ukwum manu na manu. Nke a mere m ji agwa gị: a gbagharawo ya ọtụtụ mmehie ya, n’ihi na ọ hụrụ n’anya nke ukwuu. N'aka nke ọzọ onye agbaghara obere ihe, hụrụ obere n'anya ».
Mgbe ahụ, ọ sịrị ya, "A gbagharawo gị mmehie gị." Mgbe ahụ, ndị ọbịa ahụ malitere ịsị onwe ha: "Whonye bụ onye a na-agbaghara ọbụna mmehie?". Ma ọ sịrị nwanyị ahụ: 'Okwukwe gị azọpụtawo gị; jee n'udo! ».
Onye Farisii ahụ echeghị na Jizọs kwere ka ndị mmehie “metọọ” ya, ka ha chere. Ma okwu Chineke nakuziri ayi imata ihe di iche netiti nmehie na onye nmehie: ya na nmehie anyi aghaghi imebi iwu, ebe ndi nmehie - ya bu anyi nile! - anyị dị ka ndị ọrịa, ndị a gwọrịrị ma gwọọ ha, dọkịta ga-agakwuru ha, leta ha, metụ ha aka. Na n'ezie onye ọrịa, iji gwọọ ya, ga-amata na ọ chọrọ dọkịta. Mana otutu oge anyi dabara na onwunwa nke iru abuo, nke ikwere na anyi ka ndi ozo mma. Anyị niile, anyị na-ele mmehie anyị, mmejọ anyị anya na anyị na-ele anya Jehova. Nke a bụ ahịrị nzọpụta: mmekọrịta dị n’etiti “mụ” onye mmehie na Onyenwe anyị. (Ndị na-ege ntị, 20 Eprel 2016)
← Na post gara aga Gara aga post:San Roberto Bellarmino, Senti nke ụbọchị 17 Septemba
Ọzọ Post → Post ozo:Pope Francis na-ekpe ekpere maka 'ịgba akaebe nke ebere', onye ụkọchukwu Katọlik gburu n'Italytali